English Version | Ayar Myanmar Unicode Group « Just another WordPress site
Ayar Installer CD Kits
Ayar Myanmar Fonts
​Ayar Club isasub-site of Ayar Myanmar Unicode Group where information related to Ayar Myanmar Unicode can be found. Answers for frequently ask questions can be seen and questions can be raised without hesitation.
A YouTube playlist whereacollection of tutorials related to Ayar Unicode, are posted.
​ဧ​ရာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​အ​ဖွဲ့​သည် ​ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​စာ​လံုး​များ​အ​သံုး​ြပု​မည့် ​အွန်​လိုင်း​စာ​မျက်​နှာ​များ​အ​တွက် ​အ​ေကာင်း​ဆံုး​နှင့် ​အ​ထိ​ေရာက်​ြဖစ်​ေအာင် ​ကူ​ညီ​ေဆာင်​ရွက်​ေပး​ေန​ပါ​သည်။
​ယူ​နီ​ကုဒ် ​အက္ခ​ရာ​စ​နစ်​သည် ​ဗ​မာ​စာ​နှင့် ​ြမန်​မာ​တိုင်း​ရင်း​သား ​စာ​များ ​အ​ပါ​အ​ဝင် ​ေခတ်​သစ် ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ ​စာ​ေပ​ေရး​ထံုး​စ​နစ် ​အ​သစ် ​ြဖစ်​သည်။ ​ဤ​စ​နစ်​အ​ရ ​ြမန်​မာ​အက္ခ​ရာ​များ​ကို Universal Character Set ​ဟု​ေခါ်​ေသာ ​ကမ္ဘာ​သံုး ​အက္ခ​ရာ​ဇ​ယား​တွင် ​အ​တိ​အ​ကျ ​ေန​ရာ​ချ​ထား​ြပီး ​ြဖစ်​သည့်​အ​တွက် ​ဤ​စ​နစ်​ကို ​လိုက်​နာ​ပါ​က ​ြမန်​မာ​အက္ခ​ရာ​များ​သည် ​နိုင်​ငံ​တ​ကာ ​အက္ခ​ရာ ​ေရး​ထံုး​စ​နစ်​တွင် ​အံ​ဝင်​ေစ​သ​ြဖင့် ​စံ​လွဲ​သည့် ​ြပ​ဿ​နာ​များ ​မ​ရှိ​နိုင်​ပါ။ ​ဥ​ပ​မာ​အား​ြဖင့် ​ကွန်​ပျူ​တာ ​ြဖင့် ​စာ​စီ​ရာ​တွင်​ြဖစ်​ေစ၊ ​စာ​လံုး​ေြပာင်း​ရာ​တွင်​ြဖစ်​ေစ ​စာ​လံုး​အ​ရွယ်​နှင့် ​အ​ထား​အ​သို​များ ​မှန်​ကန်​ေစ​ြခင်း၊ ​ကွန်​ပျူ​တာ​စ​နစ်​ြဖင့် ​သို​မှီး​ထား​ေသာ ​အ​ချက် ​အ​လက်​များ​ကို ​စ​နစ်​တ​ကျ ​ြပန်​လည်​ရှာ​ေဖွ​ရန် ​လွယ်​ကူ​ေစ​ြခင်း၊ ​အင်​တာ​နက် ​သံုး​စွဲ​ရာ​တွင် ​ေဖာင့််​စ​နစ်​များ ​ညီ​ညွတ်​သ​ြဖင့် ​စာ​လံုး​များ​ကို ​မှန်​ကန်​စွာ ​ြမင်​ရ​ြခင်း ​စ​သည့် ​အ​ေထာက်​အ​ကူ​များ ​ရ​ရှိ​မည် ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
Ayar Myanmar Unicode?
As the Unicode standard has been implemented in many recent technologies and modern operating systems, Myanmar users will greatly benefit by using Ayar Myanmar Unicode font, which was developed according to the Unicode Standard 6.0.
Myanmar Unicode technicians, font developers and graphic designers from Myanmar and elsewhere, and linguistic experts from Chiang Mai University, Thailand have contributed in developing Ayar Unicode font, which was created as an open source software and distributed free of charge.
Ayar Unicode fonts are produced in major Myanmar ethnic languages derived from Brahmi script and in various typefaces. Ayar Unicode group is currently developing other Unicode fonts for the rest of the ethnic languages that have their origin in Brahmi script.
Our vision, values and motto ?
MAC ​ကွန်​ြပူ​တာ​အ​တွက် ​ြမန်​မာ​စာ​လုံး​များ ​ရိုက်​နှိပ်​နိုင်​ရန် ​တ​စိတ်​တ​ပိုင်း ​ေဆာင်​ရွက်​ြပီး​စီး​ေန​ြပီ ​ြဖစ်​ပါ​တယ်။ ​သို့​ေသာ်​လဲ mac ​မှာ​ရိှ​ေသာ ​ပ​ရို​ဂ​ရမ် ​အား​လုံး​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ေြပ​ေြပ ​သုံး​စွဲ​နိုင်​ရန် ​လို​အပ်​ေန​သည်​များ​ကို ​ြဖည့်​စွက် ​ေရး​ဆွဲ​ေန​ပါ​သည်။
​ယ​ခု​လက်​ရိှ ​ြပီး​စီး​ထား​သည့် ​အ​ဆင့်​တွင် ​စမ်း​သပ်​သုံး​စွဲ​လို​သူ​များ ​အ​ေန​ြဖင့် ​ဤ​ေန​ရာ​တွင် download (Mac OSX 10.4 and later ​လုပ်​၍ ​ရ​ယူ​နိုင်​ပါ​သည်။ ​ေလာ​ေလာ​ဆယ် Adobe Programs ​များ (Indesign, PhotoShop, Illustrator ​စ​သည်​ြဖင့် ​တွင်​သာ ​ရိုက်​နှိပ် ​သုံး​စွဲ​၍ ​ရ​နိုင်​မည် ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
​၂။ ​ဧ​ရာ ​ဂ​ရပ်​ဖစ် ​စာ​လုံး​များ​
​ယ​ခု ​ဧ​ရာ​စာ​လုံး (body text)​နှင့် ​ဧ​ရာ ​တန်း​ခူး (heading ​ထုတ်​လုပ်​ေပး​ထား​ပါ​သည်။ ​ေနာက်​မ​ြကာ​ခင်​မှာ ​ဧ​ရာ-​ဂျူ​နို (​ဂ​ရပ်​ဖစ် ​အ​လှ​စာ​လုံး ​နှင့် ​သ​တင်း​ေခါင်း​စ​ဥ်​များ ​အ​တွက် ​သင့်​ေလျှာ်​မည့် ​ဧ​ရာ-​န​ဒီ ​စာ​လုံး​များ ​ထွက်​လာ​ပါ​မည်။ ​ေနာက်​ထပ်​လဲ ​ဂ​ရပ်​ဖစ် ​အ​လှ ​စာ​လုံး​များ၊ ​အ​ြခား​ေခါင်း​စည်း ​စာ​လုံး​များ ​ေရး​ဆွဲ​ေန​ြက​ပါ​သည်။
​၃။ ​က​ရင် ​ယူ​နီ​ကုဒ် ​စာ​လုံး​
​က​ရင်​စာ​လုံး​များ​နှင့် ​ပတ်​သက်​၍ ​ယ​ခင်​ရိှ​ခဲ့​ေသာ ASCII ​က​ရင်​စာ​လုံး​များ​ကို ​ယူ​နီ​ကုတ်​အ​ြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲ ​ေရး​ဆွဲ​ေန​ြပီ ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
​၄။ ​ရှမ်း ​ယူ​နီ​ကုဒ် ​စာ​လုံး​
​ရှမ်း​ဘာ​သာ​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​ရှမ်း​ဘာ​သာ ​စာ​ြကွမ်း​ကျင်​သူ​များ​နှင့် ​ညိှ​နိှုင်း ​ေန​ပါ​သည်။
​၅။ ​မွန် ​ယူ​နီ​ကုဒ် ​စာ​လုံး​
​မွန်​ဘာ​သာ​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​မွန်​ဘာ​သာ ​စာ​ြကွမ်း​ကျင်​သူ​များ​နှင့် ​ညိှ​နိှုင်း ​ေန​ပါ​သည်။
http://add.ayar.co/ ​တွင် ​ေနာက်​ဆံုး​ထွက်​ရှိ​ထား​သည့် ​အင်​စ​ေတာ်​လာ​များ၊ ​ပ​လပ်​အင်​များ၊ ​အယ်​ဒီ​တာ​များ​ကို ​တ​ေန​ရာ​ထဲ​တွင် ​လွယ်​လင့်​တ​ကူ ​ရ​ရှိ​ေစ​ရန် ​န​မူ​နာ​ရုပ်​ပုံ​များ၊ ​ဗီ​ဒီ​ယို​များ​ြဖင့် ​စု​စည်း​ေဖါ်​ြပ​ေပး​ထား​ပါ​သည်။
​How it work?
Ayar User Guide ​လက်​စွဲ​စာ​အုပ်​သည် ​ဧ​ရာ​စာ​လံုး​အ​သံုး​ြပု​မည့်​သူ​များ​အ​တွက် ​အ​လွယ်​ကူ​ဆံုး​အ​ထိ​ေရာက်​ေရာက်​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် ​စီ​မံ​ေပး​ထား​သည့် ​လမ်း​ညွှန်​တ​ခု​ြဖစ်​သည်။
Ayar User Guide ​လက်​စွဲ​စာ​အုပ်​တွင် ​ရှင်း​လင်း​ချက်​အ​ေသး​စိတ်​ကို ​ရုပ်​သံ​မှတ်​များ​နှင့်​တ​ကွ ​လွင်​လင့်​တ​ကူ ​နား​လည်​ေစ​နိုင်​ရန် ​အ​ေကာင်း​ဆံုး ​ဖန်​တီး​ေပး​သည် ​မှတ်​တမ်း​တ​ခု​လည်း​ြဖစ်​သည်။
​ရ​ယူ​နိုင်​မည့် ​လိပ်​စာ​မှာ http://goo.gl/Nu21B ​မှာ​ြဖစ်​ပါ​သည်။
​ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​မှ ​ဖန်​တီး​ထား​သည့် ​ြမန်​မာ၊ ​က​ရင်၊ ​က​ရင်​နီ၊ ​က​ယား​လီ၊ ​မွန်၊ ​ပ​အိုဝ်,​နှင့် ​ရှမ်း​ဘာ​သာ​တို့​အ​တွက် ​အ​ေကာင်း​ဆံုး၊ ​အ​လွယ်​ကူ​ဆံုး ​အ​ြမန်​ဆံုး၊ ​အ​မှား​အ​ကင်း​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် ​စီ​စဉ်​ဖန်​တီး​ေပး​ထား​ပါ​သည်။
http://user.ayar.co/ ​မှာ ​ဧ​ရာ​သံုး​စွဲ​သူ​သူ​ေတွ​ကို ​တတ်​နိုင်​သ​ေလာက် ​သက်​ဆိုင်​ရာ​အ​မျိုး​အ​စား​အ​လိုက် ​စု​စည်း​ေပး​ထား​ပါ​တယ်။ ​မိတ်​ေဆွ​တို့​သိ​ရှိ​ထား​သည့် ​ဧ​ရာ​ြမန်​မာ​ယူ​နီ​ကုဒ်​ဆိုဒ်​ေတွ​ရှိ​ရင် ​ြပန်​လည်​မျှ​ေဝ​ေပး​ဖို့ ​ဖိတ်​ေခါ်​ပါ​တယ်။ contact form ​ဆက်​သွယ်​ရန်​ေန​ရာ​က​ေန​ြဖစ်​ေစ၊ ​အီး​ေမလ်း​က​ေန ​ေပး​ဖို့​မယ် ​ဆို​ရင်​လိပ်​စာ​က WEB@ayarunicodegroup.org ​သို့ ​ေရး​သား​ေပး​ပို့​ြက​ဖို့ ​ဖိတ်​ေခါ်​လိုက်​ရ​ပါ​တယ်။
http://ready.mmblogpress.org/ ​မှာ ​အ​သင့်​သံုး​နိုင်​ေအာင်​ြပင်​ဆင်​ေပး​ထား​သည့် ​ဘ​ေလာဂ်​ဒီ​ဇိုင်း​များ​ကို ​အ​ခ​မဲ့​ရ​ယူ​အ​သံုး​ြပု​နိုင်​ပါ​သည်။ ​မိ​မိ​အ​လို​ရှိ​ရာ ​ဘ​ေလာဂ်​ဒီ​ဇိုင်း​များ​ကို WEB@ayarunicodegroup.org ​သို့​ဆက်​သွယ်​ေပး​ပို့​နိုင်​သည်။
​ြမန်​မာ၊ ​အဂင်္​လိပ်၊ ​ြမန်​မာ ​အွန်​လိုင်း ​အ​ဘိ​ဓာန်